[Thursday, January 3rd, 13] :: Hillary Clinton oo laga saaray Isbitaalka
New York (RH) Xogahayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Hillary Clinton ayaa laga bixiyey Isbitaalka magaalada New York, halkaasoo dhowr cisho lagu daweynayey ka dib markii dhiigga madaxeedu uu xinjiroobay
Mrs. Clinton ayaa xalay laga saaray Isbitaalka , waxana dib loogu celiyay gurigeeda iyadoo ay la socdeen seygeeda madaxweynihii hore ee Mareykanka Bill Clinton iyo gabadhooda Chelsea.
Ma jirin wax war ah oo ay saxaafadda siiyeen qoyska reer Clinton, laakin war ka soo baxay dhaqaatiirta daweyneysa xoghayaha arrimaha dibedda ayaa lagu sheegay in caafimaadkeedu dhinac kasta ka soo hagaagayo.
Dhaqaatiirta ayaa sheegay inay ku kalsoon yihiin inay si buuxda uu caafimaadi doonto
Goor hore oo shalay ahayd ayaa Mrs. Clinton waxa ay telefoonka kula hadashay shaqaalaheeda Washington oo howasha waday intii ay xanuunsaneysay.
Lama sheegin xilliga rasmiga ah ee xoghaye Clinton ku soo laabaneyso shaqadeeda Washington in kastoo shaqada ay ka tageyso horaanta sannadkan.
Waxa ay noqotay xoghayihii arrimaha dibedda ee ugu horreyay oo safari badan gasha, 120-waddan ayey booqatay tan iyo markii xilkaas loo dhiibay shan sano ka hor.